Ukukhetha igama ingane yakho esikhathini esizayo - ngempela osemqoka empilweni ukuthi ukwenze umzali ngamunye. Phela, lo muntu ubizwa ngokuthi ukuba uphile ukuphila, kodwa nguye omiselwe ukunquma isiphetho yonke yomnikazi. Akuyona imfihlo ukuthi igama lengane - ngokuvamile kungaphansi ingxabano hhayi kuphela phakathi abazali bakhe, kodwa Ngisho nezihlobo zabo. Nokho, lapho igama namanje kuwufanele ukunaka ukubaluleka kwayo.
Ake sibheke ukubaluleka igama Angelica, okuyinto ngempela kuyinto zithandwa namuhla. Igama lisuselwa egameni lesi Latin "angelicus", okuyinto uhumusha njengoba "ingelosi." Leli gama livela esiGrekini "Angelos" okusho "isithunywa, ingelosi." Analogs kubhekwe Angelina, Angelika. Kukholakala ukuthi Angelica ingenye ezahlukeneyo kwegama Angelina pronunciation. Nokho, la magama kuphela ezihlobene futhi wabasebenzisa njengezinceku ifomu amancane. Phela, ukubaluleka kwegama Angelica kungenye. Ngaphezu kwalokho, la magama amancane njengoba ULina futhi lika nazo ezimele.
Imfihlakalo igama Angelica
Intombazane okuthiwa u-Angelica kuyinto ngempela uyisififane futhi ubuntu abanothando. Esemncane Angelica, ngokuvamile intombazane ihlazo ofuna ukuveza ubuntu babo futhi uzokhanya. Nokho, ngeminyaka uhlamvu yayo yashintsha kakhulu. Kuba sizwele kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ezimpikiswaneni isivele esivaliwe ngaphezulu. Ngakho, idumela lalo siyashintsha zibe ngcono. Ukuze abanye abantu ngeminyaka Angelica Kuqala ngenhlonipho. Ngenxa yakho konke lokhu impumelelo emisebenzini yabo futhi ukuphila kwazo siqu kunikeza uqobo Angelica. Lisho ukuthini igama elithi lithi umnikazi walo uziqhenya kakhulu futhi, ngaphezu kwalokho, ungayifihli.
Ngaphezu kwalokho, abesifazane elinegama elifanayo - abathandi olukhulu inhlebo kanye nozungu. Lapho amaqiniso zaziwa ezizungezile, kuba isikhathi eside lapho oyodumazeka. Angelica uyakwazi ukufihla imizwa yakhe emphakathini, kodwa ukuxosha ukuba nomndeni wakho. Ukuze izingxabano emndenini kuholela emotionality wakhe ngokweqile. Nokho, naphezu kwalokhu, umyeni wakhe ziyahlanya othandweni futhi awazange asinakekele kwenye unentshiseko imizwelo unkosikazi. Phela, uneminyaka umama omkhulu nomfazi. Kuyaphawuleka ukuthi u-Angelica is ningayifuni umshado kusesekuseni kakhulu aye khona kuphela uma akwazi ukuthola ekahle yakho.
Little Angelica ezolile njalo futhi olinganiselayo. Namantombazane bathanda ukudlala onokuthula uthanda ukuba yedwa. Angelica nezintombi kancane njalo. Esikoleni engawuboni ivelele, musa abonise iyiphi amakhono akhethekile, kodwa ukufunda kahle. Ngiseyingane, futhi kakade amadala Angelica ayithandi ukuba banake ngokwakho.
Meaning of igama Angelica lapho ekhetha umsebenzi esikhathini esizayo
umsebenzi Asebenza ilahlekelwa zonke zenzuzo Angelica futhi iqala ukuba abaphambe wakhe, futhi kukhona ngisho inketho ukuthi wayekuqaphela lokho amshiye. Nokho, uma ukhetha umsebenzi wokudala ukuthi wayezoba ngokuphelele ngendlela ethandwa nguye, yena uyakwazi okufanele usichithe kuwo wonke ngokwabo futhi sifinyelele imiphumela esiphezulu.
Yiqiniso, kwelinye sihloko kunzima kakhulu ukuba embule nencazelo yegama Angelica ngokugcwele, kodwa aspukty eziyisisekelo siye sazama ibonisa.
Rostislav nencazelo yegama futhi iqiniso mayelana umnikazi walo
Njengoba engadini senziwa kuhhavini